Didim-pitsarana hosoka tratra : « Manatona foana ny Fitsarana raha vao misy mampiahiahy » hoy ny GEC-TPI
Published Date: 5 novembre 2021
Nody ventiny ny rano natsakaina. Vokatry ny faharisihan’ny solontena miisa 5 avy amin’ny fianakaviana iray nisy nisoloky amin’ny resaka hala-tany, dia sarona ny teti-dratsin’ireo tsy mataho-tody. Nanatona ny Fitsarana avy hatrany izy ireo, nanamarina ny didim-pitsarana voalaza fa nivoaka ny 01 Novambra 2021 (andro tsy fiasana) izay nentina olona mpisoloky, hakàna ny tanin’izy ireo miisa 8, ary mitotaly 13 Ha ny velarany.
Omaly 04 Novambra 2021 izy ireo no naharay ity didim-pitsarana hosoka. Avy hatrany dia tsy nisalasala nanatona ny Fitsarana Ambaratonga Voalohany (TPI) etsy Anosy androany Zoma 05 Novambra 2021, hanao fanohanana sy hanamarina ny taratasy, mba hiarovana ny lovany. Teo no tratra fa didim-pitsarana sandoka tanteraka ilay naterin’ireo mpisoloky tany amin’izy ireto omaly. Efa eo ampelan-tanan’ny Fitsarana ny raharaha, hanenjehana ireto mpisoloky
Manentana hatrany ny daholobe ny Lehiben’ny Mpiraki-draharaha (Greffier en Chef – GEC) eo anivon’ny TPI Anosy, mba hanatona tsy am-pisalasalana ny Fitsarana hanamarina ireny didim-pitsarana voaray ireny, araka ny tarigetra « Fitsarana manakaiky vahoaka sy misokatra amin’ny besinimaro ». Tsy kely lalana tokoa mantsy ny ratsy amin’izao fotoana izao, koa ilaina hatrany ny fahamalinana
« Manatona foana ny Fitsarana raha vao misy mampiahiahy, fa misokatra ny varavarana, ary tsy handoavam-bola izany» hoy ny GEC-TPI Antananarivo.
Toy izao ny fanazavana misesy, entin’ireo solontenan’ity fianakaviana nisy nisoloky, sy ny Lehiben’ny Mpiraki-draharaha eo anivon’ny Fitsarana Ambaratonga Voalohany etsy Anosy, Rtoa HERINATREHANA Inham Ella.